एमालेले किन बोलायो आकस्मिक बैठक ? – Deshko News
Home » देश » एमालेले किन बोलायो आकस्मिक बैठक ?
एमालेले किन बोलायो आकस्मिक बैठक ?
नेकपा एमालेले केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक आह्वान गरेको छ । पार्टी एकताका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक आह्वान गरिएको प्रचार विभाग सचिव विष्णु रिजालले जानकारी दिए । बैठक भोली विहीबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नेछ ।
पछिल्लो समय एमाले–माओवादीबीचको एकीकरणको विषय ओझेलमा परेको चर्चा चलिरहँदा दुवै दल तातिएका छन् । आज ४ बजे एमालेको स्थायी समिति बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ भने ४ बजे नै प्रचण्ड निवास खुमलटारमा माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयको आकस्मिक विस्तार बैठक बस्दैछ ।
दुवै दलको बैठकमा पार्टी एकताको प्रगती, दुई अध्यक्षबीच भएका सहमति, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । खासगरी एकताकै विषयमा बढी कुराकानी हुने नेताहरुले जनाएका छन् ।
आज बिहान मात्र एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच वार्ता भएको थियो ।
नेकपाका दुवै अध्यक्षद्वारा भ्रष्टाचार नगरी काम गर्न निर्देशन
ढुंगेललाई कैदमुक्त गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
नीति तथा कार्यक्रम : सत्तापक्षको समर्थन, विपक्षीको आलोचना
मोरङ अदालतमा गोरेको बयान जारी
दश महिनामा नगरपालिकाले गर्यो ९१ करोड आम्दानी